Umuntu ngamunye uyokwamukela ngicasuke uma smile esibukweni futhi ubone lapho waphendula smiling aso neze. namazinyo Shiny ezimhlophe ungenza uyoba nokuzethemba okwengeziwe, kuyilapho namazinyo yellow ukwenza uzifihla ukumamatheka ngokushesha ngangokunokwenzeka. Kunezizathu eziningi ukuthi kungaholela yokuthi amazinyo akho ngeke phuzi, hhayi omhlophe, njengoba zofuzo (abanye abantu nje awunayo inhlanhla) ziphethe yokuphila nezinto ezifana okungajwayelekile izinyo ukuxubha, ukubhema noma ugwayi ohlafunwayo, ngisho yokungadli ukudla okuthile.
ukudla Abaningi kungabangela amabala ku amazinyo akho ngoba ziqukethe acid, ngokuthi tannins. Kuyinto lezi tannins ninamathele amazinyo akho ngibenze phuzi ngokuhamba kwesikhathi, ikakhulukazi uma nidla, noma niphuza le mikhiqizo njalo. Nakuba uhlambulule umlomo sebephuze izingilazi lezi ukudla kuzokusiza ahlanze tannins kusukela amazinyo, ungaqiniseka ukuthi isazoqhubeka phuzi ngokushesha noma kamuva, uma uqhubeka udle ukudla okufanayo. Okuwukuphela nandlela ukubhekana izindawo - iyona ukuqedwa ngokuphelele lokhu kudla kusuka ekudleni kwakho.
Hhayi izindaba ezimnandi kakhulu? Cabanga ukuthi amazinyo nephuzi yokuguga bese benza wena muhle kangako. Noma kunjalo, kudingeka wazi ngalokho ukudla umamatheke meree acwebezelayo futhi amahle, ukuze ukwazi ukulahla ngokuphelele kubo noma okungenani banciphise ukusetshenziswa kwabo, ukwehlisa ematfuba nesenzakalo of amabala on the amazinyo. Uma ubuka uhlu oluphelele, uzokwazi ukuba sihlaziye ukuthi yiziphi imikhiqizo ezivame ukubhekana nazo empilweni yakho, futhi kangaki. Bese sizokwazi ukwenza isinqumo ngokuthi ufuna ukulishiya ngokuphelele kulokho noma kulowo mkhiqizo noma uzame ukwehlisa ukusebenzisa yayo, kodwa ngesikhathi esifanayo futhi basebenzisa iseluleko anikezwe esihlokweni ngasinye mikhiqizo.
Ikhofi netiye aqukethe esiningi tannins, yingakho lezi iziphuzo ngokuvamile izinto ndawo, kuzwakala on the amazinyo. Ukuze ugweme ukubukeka izindawo ezinjalo, ngenkathi ukungayeki ngokuphelele isiphuzo eziyizintandokazi zakho, ungasebenzisa inkomishi ngesivalo. Ngaphambili, kuphakanyiswe ukusebenzisa straw ukuphuza, futhi usengakwazi ukusizakala lesi seluleko, uma kungekhona ukuthi babenovalo imibimbi naseduzane komlomo. Kodwa okuhle nakakhulu wukuthi ukusebenzisa inkomishi ngesivalo, njengoba kulokhu, ukuthi ungavumeli isiphuzo ukuba eside emlonyeni, itholakala cishe ngokushesha emphinjeni. Ngaphandle ukuthi uyofuna ubambe ikhofi noma itiye emlonyeni, okuyinto negates ngokuphelele yonke imizamo. Ukuyibeka kalula, nje usebenzise ikhava lesi sitsha. Ngokwemvelo, kunatsa ezinjalo, akha indima umxhwele ukuphila cishe wonke umuntu, kunzima ukulishiya ngokuphelele, ngakho kufanele ukhethe ukuthi kulungile kuwe.
Uyazi lokhu linikeza umqondo ezingemnandi ukuthi uthole amazinyo yakho ngemva kwakho aphuze sips ambalwa ewayini? Nakuba ezimweni eziningi, lezi izindawo kukhona yesikhashana, kodwa futhi uhlale amazinyo, kuye ngokuthi indlela namazinyo umunce ketshezi. Tannins nazo kwezigwegwe amabala ngewayini. Elinye iqiniso, okuyinto ongeke neze waba nokuyicabanga: iwayini elibomvu nokumhlophe kungayibhebhethekisa namachashaza ngamazinyo neminye imikhiqizo. Nakuba iwayini emhlophe kukodwa imbangela amabala on the amazinyo, ingenza izindawo ezikhona mnyama. Lokhu kuyizindaba ezimbi labo abaphuza iwayini emhlophe ukugwema amabala on the amazinyo. Uma uphuza amanzi kanye iwayini, noma ngemva kokuphuza iwayini, ungakwazi ukunqoba lo amabala nqanda them zibonisane on the amazinyo, ukugeza nabo bonke acid ezingaphephile. Ngakho, akudingeki ukuba ngidele iwayini ngokuphelele, nje ungakhohlwa Hlambulula umlomo wakho, futhi ungacabangi ukuthi iwayini white ngokuphelele ephephile amazinyo akho. Lokhu kahle ubulele kude abangaphezu koyedwa.
Banikezwe umbala obomvu kanye ne-asidi eningi ka utamatisi ngeke kube yisimanga ukuthi pasta sauce ingabagulisa amabala. Uma ufuna ngezikhathi ukujabulela lokhu sauce, kodwa namanje nokugcina mhlophe kwamazinyo abo, udinga ukwengeza kuya appetizer isidlo, ehlanganisa broccoli, isipinashi noma ezinye imifino. Imifino eshiya uhlobo ifilimu zokuzivikela ku amazinyo akho, ukuvimbela nabo kusuka kunanyathelwe sauce ukubukeka kulandela izindawo.
Summer injabulo, aluhlaza okwesibhakabhaka, amajikijolo kanye raspberry, kungenza amazinyo akho kancane kancane shiny. La majikijolo zivame ukubangela amabala on the amazinyo, njengalezo ukuthi ushiye newayini elibomvu. Nokho, ukubhekana nazo kunzima kakhulu kangakanani. Uma ukuphuza amanzi amaningi ngesikhathi nangemva ukudla amajikijolo, unganqoba ibala. Nokho, kubalulekile ukuphawula ukuthi ngeke Kunoma yikuphi akukwazi kwesokudla emva kokudla ukuxubha amazinyo akho. Ungathanda basuse namazinyo acid ngokushesha, kodwa hhayi ukuba uwuhlikihle nabo koqweqwe lwawo isixubho.
ukhari egqamile futhi ezimibalabala ngokuhamba kwesikhathi anganika amazinyo akho Tint aphuzi. Uma uvame ukudla equkethe turmeric, namakha ukhari nezinye izinongo, okuhle ukuthi ungase uphawule ukuthi amazinyo akho ungabheki kwafana ngaphambili. Njengoba kunjalo nososo esekelwe utamatisi, kufanele ufake ukuze imifino yakho ethola noma izithelo ukudla namanzi amaningi.
uviniga balsamic kokubili esidi liqhakazile, kodwa ngisho ngakho, abantu abaningi bayamangala ukuthi kubangela amabala on the amazinyo. Uma ufuna ukuqhubeka usebenzisa balsamic uviniga ekudleni kwakho, kufanele ucabange indlela uyifaka isaladi noma iklabishi, okungaba yisithiyo izinto.
Uma oyibeke beet wake okuphekiwe, uyazi ukuthi ngeke ukwazi ukushiya amabala. Esikhathini beetroot liyabukeka irubi umbala obomvu, kodwa kusho ukuthi ushiya ibala elithile, okuyinto ngenxa kunzima kakhulu ukulwa. Beet - kuba umkhiqizo ethandwa esizosishiya amabala ku amazinyo akho, futhi ukubhekana nazo, kudingeka udle beet akuvamile futhi izinto eziningi ezincane.
Sebenzisa imikhiqizo mhlophe
Isikhathi esining impela ungezwa ukuthi imikhiqizo mhlophe amazinyo ziyingozi, kodwa ochwepheshe bathi le mikhiqizo ziphephile, inqobo nje uma uwasebenzisa ulandele iziyalezo ezikuyo. Ungayisebenzisi kubo kakhulu futhi kaningi kakhulu, futhi ngeke ube nezinkinga kubo. Nokho, uma unenkinga hypersensitivity, imikhiqizo ejwayelekile mhlophe kungaba babhebhethekise inkinga yakho ukuzwela. Noma kunjalo, nawe nakanjani kudingeka uthintane wamazinyo wakho mayelana izindawo evelayo ku amazinyo akho, kanye ngezindlela zokubhekana nazo.
Indlela mhlophe amazinyo ekhaya
Ukuhlanza Air Flow: Ngaphambi & Ngemuva izithombe, ukubuyekezwa
Rafting emfuleni Belaya e Bashkiria
Likuphi New Zealand, ngalokho izwekazi?
Indlela ukunamathisela vinyl lodonga
Rudolf Abela biography, imisebenzi, izithombe